Gabar Sixiran Oo Siweyn Loo Wasaayo Dhool Jaban
Dollsyada Nolosha ee ugu Fiican ee leh Dameer Weyn
Caruusadaha galmada dameerka weyn ayaa qancin kara dhamaan khiyaaliyadaada ku saabsan futada. Waa tan dameerkeena weyn ee aruurinta caruusadaha galmada. Waxay leeyihiin dherer kala duwan, midabbada maqaarka iyo astaamaha jirka. Haddii aad jeceshahay qallooca khatarta ah iyo dameerka, kani waa galmadaada galmada. Jidh aan caadi ahayn oo xabadka weyn leh iyo dameer wareegsan oo qurux badan. Dameer weyn ayaa la mid ah Blockbuster-ka ku daali kara. Waxaan leenahay sannado badan oo waayo-aragnimo ah soo-saarista caruusadaha galmada, waxaana jira noocyo badan oo kala duwan oo caruusadaha galmada laga doorto. Caruusadahaani waxay ka samaysan yihiin qalab tayo sare leh. Waxaad ku iibsan kartaa kalsooni.
Clemens - 158CM Dameer Weyn TPE Dolls-yada Uurka
Brewster - 163CM E koob Badhan weyn Giirinta Fitness-jecel BBW Sex Dolls
Charles - 156CM H-koob WM NO.363 Madaxa TAN Maqaarka TPE Jinsiga Doll
Qaro weyn oo Dameer Drooping Naaso Waaweyn TPE doll 163 CM Novia Hill
Micro Fat Blue Indhaha Dadka Weyn ee Weyn Cynthia Grace 158CM Jinsi Doll qaro weyn bushimaha naaso waaweyn
Timo Dheer Oo Dheer 165CM Big Butt D Cup TPE Sex Doll Victoria
Naagaha Weyn Ee Galmada Doll Dadka Weyn ee Wehel Doreen Pullman Maxbuus Muhiim ah
Gemma - 162CM Fat Fat Busty TPE Sex Doll